मुम्बई भर्सेस चेन्नईः कसले काट्ला आज फाइनलको टिकट? यस्तो छ विगत - Everest Dainik - News from Nepal
मुम्बई भर्सेस चेन्नईः कसले काट्ला आज फाइनलको टिकट? यस्तो छ विगत
काठमाडौं, वैशाख २४ । भारतमा जारी १२औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को पहिलो क्वालिफायरमा तीन–तीन पकटकका विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपरकिंग्स भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति ७ः४५ बजेदेखि चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नइमा शुरु हुँदैछ ।
आजको विजेता टिमले फाइनलको टिकट काट्न सफल हुनेछ । पराजित टिम भने १० मेमा हुने दोस्रो क्वालिफायरमा एलिमिनेटर विजेतासँग भिड्ने छ । जारी सिजनको समूह चरणका दुवै खेलमा चेन्नई मुम्बईसँग हार बेहारेको थियो । साथै, चेन्नईको घरेलु मैदानमा मुम्बईले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको रेकर्ड छ । मुम्बईले चिन्नास्वामी स्टेडियममा २०११ यता कुनै पनि खेलमा हार बेहोरेको छैन । पछिल्ला ५ खेल हेर्ने हो भने मुम्बई बलियो देखिन्छ । पाँच खेलमा चेन्नईले एक म्याचमा मात्र मुम्बईलाई हराउन सफल भएको छ ।
मुम्बई इन्डियन्सः रोहित शर्मा (कप्तान), क्विन्टन डि कक (विकेटकीपर), हार्दिक पाण्ड्या, कुणाल पाण्ड्या, सूर्यकुमार यादव, राहुल चाहर, किरण पोलार्ड, इशान किशन, जसप्रित बुमहरा, लसिथ मलिंगा र मिचेल मैकलेनघन
चेन्नई सुपर किंग्सः महेन्द्रसिंह धोनी, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, फाफ डुप्लेसी, शेन वाट्सन, सुरेश रैना, अम्बाती रायडू, दीपक चहर, रविन्द्र जडेजा, डीजे ब्रावो र मुरली विजयी
याे पनि पढ्नुस मुम्बई इन्डियन्सको पहिलो जित, विराट कोहलीको बैंङ्लोर ४६ रनले पराजित